Kim Kardashian Makono - PetrPikora.com
Kim Kardashian Makono
PetrPikora.com on Svondo 16, 2018
Kim Kardashianová (akaroora Kimberly Kardashian West, kubereka zita Kimberly Noel Kardashian, * 21. 1980 October, Los Angeles) iri chokuAmerica paterevhizheni unhu, muenzaniso uye entrepreneur pamusoro Armenian mavambo, mudzimai rapper Kanye West.
Akakura yakapfuma pedyo Los Angeles, Beverly Hills, nekuti baba vake, Robert Kardashian aiva muvambi Movie mimhanzi yaunonyanya, Inc. uye anozivikanwa gweta (pakati vamwe aitsigira nhabvu mutambi OJ Simpson, shamwari yake pachake). shamwari yake kubva pauduku akanga Paris Hilton, kuti izvo Kardashianová sezvo rudzi kukurumbire, kazhinji tichienzanisa. Akashanda nekambani yababa vake muhuduku hwake, ndokuda kuita shanduri, asi yakakundikana.
2006 gore vakadzokera bhizimisi uye akavhura nehanzvadzi dzake mbiri uye trendy Boutique nokuputsanya zvakasimba Calabasas.
2007 yakagamuchirwa yega yega inotarisana nevanhu VideoIro iye akaita naye ipapo nemukomana Ray J. Pachena Entertainment kambani inobhadharwa kurekodha miriyoni imwe US ​​madhora uye akatanga kutengesa pasi zita Kim Kardashian Superstar. Kardashian kambani yakagamuchirwa uye yakapiwa madhiriyoni emadhora emadhora. Zvinyorwa zvake zvakatora mamiriro ake ekurumbira uye kambani yeTV. Network Kim akapa wake dzinoratidza, chokwadi akaratidza kuratidza upenyu hwake uye kuti mhuri yake (hanzvadzi Kourtney uye Khloé, munun'una Robert, mai Kris Jenner, vokurera uye Olympic medalist Bruce Jenner navanasikana Kendall uye Kylie). Iko kuratidzwa kwaive Kuramba Iine Kardashians uye yakanga iri kubudirira. Akatorawo mapikicha asina kufanira kuBlayboy.
Year 2008 Kim Kardashianová, kuti uve inonyanya kufarirwa kukurumbire kutsvaka injini Google iri US, iyo kusvikira panguva iyoyo aiva muimbi Britney Spears. Akava chiso chaBongo Jeans uye zvinonhuwira zvayo. Uyezve, zvisinei akaedza kupaza ari firimu,, akawana chinhu nominations shoma nokuda Golden Raspberry kuti Zvakaipisisa Actress.
Kubwinya kwakagara kuchikurudzira ukama nevarume vakakurumbira avo vaiwanzoguma nekurambana nokukurumidza. Musoro wakauya 2012 paakazova shamwari yekakurumbira kambani Kanye West. Muna 2013 akaberekera mwanasikana wake North. 2014 akatora vaviri muFlorence, Italy, uye gore gare gare, 5. December 2015, mwanakomana weStest West akazvarwa. 15.ledna 2018 amai vake vakatsiva vakatakura mwanasikana wavo Chicago West.
CartoonscartoonKim KardashianKim Kardashian
9 clock yapfuura